लगानी सम्मेलन: प्रतिपक्षीदेखि विदेशीसम्म सकारात्मक, सरकार उत्साहीः गेमचेन्जर परियोजनामा सम्झौता हुने
नेपाललाई सघाउन तत्पर छौँ, हार्टविग स्याफर, उपाध्यक्ष, विश्व बैंक--लगानी बढाउँछौँ, सिजिन चेन, उपाध्यक्ष, एडिबी
निर्माण सञ्चार, आजको विशेष । सरकारले ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ आयोजना गरेको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९’ शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।
सम्मेलनमा सरकारी पदाधिकारी, विकास साझेदार र विदेशी लगानीकर्ता गरी ३९ देशका ७३९ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
तीनै तहको निर्वाचनपछि बनेको स्थिर र बलियो सरकारले सम्मेलनमा आफ्नो आर्थिक नीति सुनाउँदै उनीहरूको विश्वास जित्ने भरपूर प्रयास गरेको छ ।
सरकारले कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका ७७ परियोजनामा विदेशी लगानी आह्वान गरेको छ ।
सहभागी प्रतिनिधिले शुक्रबार सम्मेलनबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही उद्योगीले लगानीको घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।
यसबाट सरकार उत्साही देखिएको छ । लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता भने शनिबार मात्रै टुंगो लाग्नेछ ।
लगानीकर्तालाई सुरक्षा, नाफा र लाभांश फिर्ताको ग्यारेन्टी दिन्छौँ: प्रम ओली
लामो समयको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएर स्थायित्व आएको छ । राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत भइसकेका छन् । राजनीतिक रूपान्तरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन, आर्थिक रूपान्तरण पनि चाहिन्छ ।
अबको मुख्य एजेन्डा भनेको आर्थिक रूपान्तरण नै हो । यसका लागि हामीले यस वर्ष व्यापक कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरेका छौँ । विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनेको छ ।
हामीलाई दोहोरो आर्थिक वृद्धिको खाँचो छ । यसका लागि ठूलो पुँजी चाहिन्छ । स्वदेशी पुँजी मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यहाँ आउनुस् र ठूलो लगानी गर्नुहोस् ।
लगानीको सुरक्षा, नाफा र फिर्ता लैजान सक्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी दिन्छौँ । सबै विदेशी लगानीलाई स्वदेशीसरह व्यवहार गर्छौँ । नेपाल लगानीका लागि भर्जिन ल्यान्ड हो ।
सबै क्षेत्र र ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ । नेपालमा लगानी गरेर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा साझेदारी गर्नुहोस् ।
कांग्रेस सधैँ उदार छ, विदेशी लगानीलाई सघाउँछः रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
अब नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय शक्ति आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी पुँजीले मात्रै पुग्दैन, त्यसैले विदेशको सार्वजनिक र निजी लगानी पनि आवश्यक पर्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रले पूर्वाधार र निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ । नेपाल ग्रिनइनर्जी पावरहाउस बन्न सक्छ । यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकुदका पूर्वाधारमा समेत लगानीको सम्भावना छ ।
क्रिकेटको राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ, नेपाल । नेपाली कांग्रेसले विदेशी लगानीलाई सघाउँछ । हामी सधैँ खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार, निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारकै पक्षमा छौँ ।
लगानी सम्मेलन कोसेढुंगा साबित हुनेछ, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा
नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको अधिक सम्भावना छ । लगानीका लागि म विदेशी लगानीकर्ता तथा विकास साझेदारलाई आग्रह गर्छु ।
नेपालले लगानी प्रवद्र्धनका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनेको छ ।
नेपाल नयाँ यात्रामा छ । तपाईँहरू जुन क्षेत्र वा ठाउँमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो हामी उपलब्ध गराउँछौँ । औद्योगिकीकरण, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि विदेशी लगानी र प्रविधिको खाँचो छ ।
लगानी सम्मेलनले नेपाल सरकार, नेपालको निजी क्षेत्र तथा विदेशको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच बुहपक्षीय नेटवर्क बनाउन महŒवपूर्ण अवसर दिनेछ । यो एउटा कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।
‘नयाँ नेपाल’ उदाउँदै छ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली
नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण बनाएको छ । नेपालको निजी क्षेत्र र सरकारबीच कुनै मतभेद छैन । आर्थिक तथा लगानीका नीतिमा कुनै भिन्नता छैन ।
सरकार निजी क्षेत्रसँगै छ । अहिले नेपाल नयाँ ढंगबाट अघि बढिरहेको छ । नयाँ नेपाल उदाइरहेको छ ।
एकद्वार सेवा दिन्छौँ लगानी गरेर नाफा लैजानुहोस्, उद्योगमन्त्री यादव
पहिला हामी वैदेशिक लगानीसँग डराउँथ्यौँ । तर, अहिले हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन आएको छ । हामीले खुला भएर लगानीमैत्री विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएका छौँ ।
लगानीकर्तालाई हामी एकद्वार सेवा दिन्छौँ, नाफा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छौँ । नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् ।
जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण बनेको छ, वर्षमान पुन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री
सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नुको विकल्प छैन । समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्र महवपूर्ण छ ।
नेपालमा प्रशस्त जलविद्युत् विकासको सम्भावना छ, सरकारले आउँदो १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय बजारहरूसमेत खुला भइसकेको सन्दर्भमा नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्ने राम्रो वातावरण बनेको छ ।
नेपालजस्तो प्रतिफल आउने अर्को ठाउँ छैन, सुरज वैद्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष
राजनीतिक दलले आर्थिक विकासलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । यहाँ लगानीका प्रशस्त क्षेत्र छन् र प्रतिफल पनि उच्च छ । नेपाल लगानीको प्रतिफलका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य हो ।
नेपालमा युनिलिभर, एनसेलजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानीको १ हजार प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल लिन सफल भएका छन् ।
यस्तो प्रतिफल अन्त कहाँ पाइन्छ?
नेपाललाई सघाउन तत्पर छौँ, हार्टविग स्याफर, उपाध्यक्ष, विश्व बैंक
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरेको छ, जसले लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण निर्माण गरेको छ ।
विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालले लिएको भिजन प्राप्तिलाई सघाउन हामी विकास साझेदार पनि यहीँ छौँ ।
नेपाल ठूला छिमेकीको बीचमा छ, यसबाट लाभ लिनुपर्छ । विश्व बैंक र नेपालको साझेदारी बलियो छ, यसले निरन्तरता पाउनेछ ।
लगानी बढाउँछौँ, सिजिन चेन, उपाध्यक्ष, एडिबी
राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेपछि नेपालले पहिलो लगानी सम्मेलन गरेको छ, यसले आर्थिक सुधारको संकेत गर्छ । नेपाल र एसियाली विकास बैंकबीच राम्रो सम्बन्ध छ ।
हालसम्म एडिबीले नेपालमा ६ अर्ब डलर लगानी गरिसकेको छ । मेलम्ची र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एडिबीको लगानी छ ।
यस्तै, ठूला परियोजनामा थप लगानी गर्न एडिबी तयार छ ।
भरपर्दो लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, यू थाउङ टु, लगानी तथा विदेश आर्थिक सम्बन्धमन्त्री, म्यानमार
नेपालमा साक्षरता बढ्दै गएको छ भने गरिबी घट्दै गएको छ ।
दक्षिण एसियामा आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै गएको छ, नेपालले पनि राम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । नेपाल र म्यानमार उस्तै छन् ।
नेपालले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्छ । दिगो र भरपर्दो लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । एसियामा वैदेशिक लगानीको अवस्था निराशाजनक छ ।
हामीलाई विदेशी लगानी अत्यावश्यक छ । एसियामा नयाँ युग सुरु भएको छ । त्यसैले मौकाको फाइदा उठाउँदै लगानी गर्नुपर्छ ।
क–कसले गरे लगानीको घोषणा ?
सूर्य नेपालका प्रबन्ध–निर्देशक अभिमन्यु पोद्दारले करिब ६ अर्ब लागतमा लक्जरी होटेल खोल्ने घोषणा गरेका छन् ।
उपभोग्य सामग्रीमा समेत लगानी विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताए । मुथुट ग्रुपका अध्यक्ष एमजी जर्ज मुथुटले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने बताए ।
मुथुटले नेपालको बैंक नै किन्न सक्नेसमेत बताए । उनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने अवसर खोजिरहेको बताए ।
सुडानका लागि नेपालका अवैतनिक महावाणिज्यदूत अब्बास अलबखित माउसाले नेपालमा ठूलो होटेलमा लगानी गर्ने उद्घोष गरे ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा एचएच बजाजका प्रबन्ध–निर्देशक शेखर गोल्छाले अटोमोबाइलको एसेम्बलसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्ने बताए ।
सिल्भर हेरिटेज ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साइक बोलसोभरले झापामा पाँचतारे होटल खोल्ने बताए ।
सरकार र विदेशी लगानीकर्ताबीच शनिबार करिब एक दर्जन परियोजनामा समझदारी तथा सम्झौता हुँदै छ । सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्ताले कृषि, जलविद्युत् र सडक परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्नेछन् ।
केही ‘गेमचेन्जर’ परियोजनामा लगानी गर्न विकास साझेदारसँग समझदारी (एमओयू) हुने लगानी बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यले बताए ।
सम्मेलनमा निजी क्षेत्र उत्साही देखिएको छ । विषयगत छलफलमा पनि उनीहरूले उत्साहप्रद सहभागिता जनाएका छन् ।
उद्योगी प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सम्मेलनबाट लगानीको माहोल बनेको बताए । शेखर गोल्छाले विश्वासको वातावरण बढाएको बताए ।
‘नेपाल लगानीको प्रतिफलका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य हो, नेपालले यो कुरा लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्नुपर्छ,’ उद्योगी सुरज वैद्यले भने भन्ने आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ
शनबिार, १६ चैत, ०७५